Liverpool Oo War Farxad Leh Ka Heshay Xiddigii Dhaawaca Culus Iyo Qalliinka La Isku Raaciyey Ee Virgil van Dijk – Laacibnet.net
Liverpool Oo War Farxad Leh Ka Heshay Xiddigii Dhaawaca Culus Iyo Qalliinka La Isku Raaciyey Ee Virgil van Dijk
Liverpool ayaa war farxad leh ka heshay difaaca reer Netherlands ee Virgil van Dijk oo bishii hore ee October uu dhaawac culus kasoo gaadhay jilibka kaddib markii uu goolhayaha Everton ee Pickford ku qabtay taako sababtay in qalliin degdeg ah lagu sameeyo.
Virgil van Dijk oo hore loo sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan toddoba bilood oo ka dhignayd in aanu xili ciyaareedkan socda kusoo laaban doonin, ayaa waxa hadda kasoo muuqanaya astaamo farxad gelinaya kooxdiisa iyo xulka qarankiisa.
Laacibkan oo ka jabay carjawda hoose ee jilibka ayaa waxa la sheegay inuu durba bilaabay soo kabashada oo uu tababar fudud samaynayo, taas oo rajo gelinaysa kooxdiisa.
Reds ayaa filaysa in haddii uu soo kabashadan degdegga ah sii wado, in Virgil van Dijk ay suurtogal tahay inuu kusoo laabto garoomada xili ciyaareedkan oo socda, isla markaana uu ka caawin doono bilaha ugu dambeeye inay u dagaallamaan sidii ay horyaalka u difaacan lahaayeen.
Virgil van Dijk oo qalliinkiisa guuleystay lagu sameeyey October 18, ayaa waxa uu dhamaystiray wajiga koowaad ee qorshaha soo kabashadiisa loo dejiyey, waxaanu si qunyar ah u sameeyey tababar fudud oo u suurtogelinaya inuu socon karo, jidhkiisana uu dib ugu diyaarin karayo sidii uu si buuxda ugu soo kaban lahaa.
Warkan ayaa Liverpool ugu soo beegmay xilli ay sidoo kale dhaawacan yihiin Joe Gomez oo isaguna xili ciyaareedka oo dhan seegaya iyo Trent Alexander-Arnold oo muddo bil ah garoomada ka maqnaan doona.
Tababare Jurgen Klopp ayaa rajaynaya in Fabinho uu si buuxda usoo kabto ka hor kulanka adag ee Leicester City ee Axadda kaddib dhawr kulan oo uu seegay.
Dhinaca kale, xulka qaranka Netherlands ayaa rajaynaya inay Van Dijk helaan ka hor inta aanu bilaabmin tartanka Euro 2020 oo dib loogu dhigay dhamaadka xili ciyaareedkan.